Vavaka ho an'ny Trinite Masina. ? Tranga fitiavana, sarotra ary maika.
11 Famakiana Min
Vavaka aminny Trinite Masina Katolika noho ny fitiavana, tranga sarotra sy maika ary fiarovana dia iray amin'ireo matanjaka indrindra satria mangataka amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Ny tenin'Andrimanitra dia mampiseho antsika Andriamanitra Rain'ny zavatra rehetra, avy eo dia mampahafantatra antsika amin'i Jesosy Kristy izay ilay Andriamanitra dia namboarina ho olona, ​​dia teo amintsika ary nanolotra ny fiainany ho an'ny olombelona, ​​rehefa nandeha tany an-danitra izy dia namela antsika ho any amin'ny Fanahy Santo ary ankehitriny, afaka miantehitra telo daholo isika.
Any an-danitra ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina miasa ao am-pontsika toy ny afo.
Ny fiangonana katolika dia manana andian-dahatsoratra vavaka izay miantefa indrindra indrindra amin'ireo telo izay iarahana dia iray, ny tokana tokana.
Izy ireo dia vavaka atsangana amin'ny tranga isan-karazany izay tsy vitan'ny tanan'ny olona ary tsy afaka miasa ary miankina amin'ny vavaka iray isika satria ny fahagagana fotsiny ihany no ampy.
1 Vavaka amin'ny Trinite Masina Iza no Andriamanitra masina?
1.1 Vavaka ho an'ny Trinite Katolika Masina
1.2 Vavaka aminny Trinite Masina ho an'ny fitiavana
1.3 Vavaky ny Trinite Masina ho an'ny raharaha sarotra sy maika
1.4 Fohy ho fiarovana
Vavaka amin'ny Trinite Masina Iza no Andriamanitra masina?
Ny firaisana Ray; Ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia ireo izay mandrafitra ny Trinite Masina.
Miatrika tsikelikely ny fisehoany ary afaka mahita azy ireo izahay mandritry ny Malagasy.
Tamin'ny voalohany, Andriamanitra dia niseho namorona ny lanitra sy ny tany ary ny olona rehetra.
Avy eo ao amin'ny evanjelin'i Testamenta vaovao hitantsika fa tonga i Jesosy Kristy, teraka avy amin'ny virjiny tamin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina.
Ao isika manomboka manomboka mahalala ny fiainan'ny Mpamonjy manontolo, avy eo rehefa maty izy dia mitsangana ary miakatra ho any an-danitra, avelany amintsika ny fampanantenan'ny Fanahy Masina, saingy rehefa afaka fotoana iray monja dia niseho tamin'ny andro Pentekosta nitantara ny bokin'ny Asa Apôstôly ary mbola manohy antsika miaraka mandraka androany.
Trinite mahery izay manome antsika ny fangatahan'ny fontsika, dia ireo ataontsika matetika amin'ny fanahy.
Ny Trinite Masina dia vonona hihaino anay foana.
Vavaka ho an'ny Trinite Katolika Masina
Midera anao aho, ry Fanahy Masina paraclito, ho an'Andriamanitro sy Tompoko, ary misaotra anao mandrakizay amin'ny alàlan'ny fitsarana any an-danitra amin'ny anaran'ny Virjiny Sambatra, ny vadinao be fitiavana amin'ny fanomezana sy tombontsoa rehetra natoronao azy, indrindra fa izany fahatsarana sy masina fiantrana izay nandrehitra ny fony masina sy madio am-bavany tamin'ny asan'ny Andony malaza indrindra amin'ny lanitra; ary mangataka aminao amim-panetren-tena amin'ny anaran'ny vadinao tsy mety maty aho, omeo ahy ny fahasoavana mamela ny helokao rehetra izay nataoko hatramin'ny fotoana voalohany nanotako; Mandraka ankehitriny izao, izay mampalaheloviko mandrakizay, miaraka amin'ny fikasana ho faty fa tsy manafintohina ny Andriananao masina; ary amin'ny alàlan'ny fahamendrehana lehibe sy tena mahomby amin'ny vady malalanao indrindra dia mangataka aminao aho mba hanome ahy sy i N. ilay fanomezana sarobidy indrindra amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavan'Andriamanitra anao, ka omeo ahy ireo jiro sy fanampiana manokana izay efa natolotry ny Providence mandrakizay anao hamonjy ahy sy hitarika ahy ho Eny.
Vavaky ny Trinite Katolika Masina dia misy fiantraikany eo noho eo.
Ny vavaka, fitaovam-piadiana mahery vaika afa-tsy izay antsika mino ny herin'ny Tompo ihany.
Fitaovana matanjaka izay fantatry ny Eglizy Katolika ny fampiasana azy ary mamela maodely ho antsika, ohatra iray mba hahafantarantsika ny fomba angatahina, inona no teny hampiasaina
Tsy ratsy ny vavaka, fotoana zatra mivavaka, mianatra hivavaka amin'ny fomba marina, ka izany no antony misy ny vavaka hitarika antsika amin'ny fomba.
Vavaka aminny Trinite Masina ho an'ny fitiavana
Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena.
Trinite Masina, fanombohantsika sy fiafarana, heriko sy fiarovako ary fanampiana masina avy amiko, izay mitoetra ao am-poko ary ao anaty fanahiko ary mamelona ny maha-olombelona ahy manontolo.
Trinite Masina Trinite, mendrika ny haja amam-boninahitra, voninahitra sy fiderana rehetra, mino ny herinao aho, Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanahy Masina.
Matoky tanteraka ny fanomezanao aho ary manantena anao, ary ny fanantenako sy ny fiantrana ataoko eo an-tananao, ampio aho hampitombo ny finoako sy isan'andro amin'ny fitiavanao ho olona tsara kokoa ary mifoha feno fampaherezana sy fahavitrihana.
Andriamanitra sambatra, ianao no loharano nipoiran'ny fitiavana sy ny fiainana, namoronanao anay araka ny endrinao sy ny endrinao, ary noho ny fitiavanao anay dia nirahinao Andriamanitra Zanaka mba hahafahany manavotra anay sy hanafaka anay amin'ny ota, izaho ...
(Lazao ny anaranao)
Omeko anao sy nohamasininao izay rehetra mitoetra ao anatiko ary tena miala tsiny anao fa mangataka anao aho mba hamela ny heloko rehetra noho ny hadisoako nataoko sy ny fahotako nataoko anio ary manasaraka ahy aminao.
Trinite Masina, mangataka aminao aho mba hamindra fo amiko, ary omeo fanampiana anao aho, mba ho feno fiadanam-po ny fanahiko ka manova ny tenako ho marary, mahatakatra, manetry tena ary mitafy ny hatsaranao.
Ry Fanahy Masinao feno fahasoavana, loharanon'ny fampiononana rehetra, mangataka aminao aho mba hanatsara ny fanahiko amin'ny haben'ny fanomezanao.
Ianao no fanantenako sy ampingako amin'ny ady, Ianao no heriko amin'ny zava-tsarotra sy ny tebiteby.
Noho izany antony izany dia nandohalika teo anoloanao aho mba hangataka aminao mba hahafahanao manantona tanana sy hifona ho ahy eo anatrehan'Andriamanitra Ray hahazoana ny fanampiany haingana.
Ry Fanahy Masina, amboary ny heriko ary ampahereziko ny hanohizako ity ady atrehako ity, avereno azafady ny sofinao amin'ny fitalahoako ary omeo ahy izay iriko sy angatahina aminao anio.
Azafady, ampangiro ato am-poko ny fitiavan'Andriamanitra izay manazava ny fon'ny mpanaraka anao mahatoky. Noho ny Fitiavanao, Heriko sy famindramponako mangataka anao hanafaka ahy amin'ny fahoriana rehetra, ary tsy misy mahasakana ny fiadanako na mampijaly ahy.
Trinite Masina, tonga tamim-pahatokiana tanteraka aminao aho, ary amin'ny finoana rehetra ny fanahiko, mba ahafahanao manamaivana ny alahelo izay mahatonga fahoriana lehibe amiko, azafady, sitrano ny fery ny foko ary ampidinikoo ny famindram-ponao amiko ary mila betsaka aho vonjy taitra:
(Lazao izay zavatra ilainao maika ary mangataha fanampiana mahafinaritra azy)
Andriamanitra Ray ô, misaotra anao satria mihaino ny vavako ianao noho ny fitiavanao infinito, ary ho an'ny fiarovana omen'ny fitiavanao ahy, izay fialofana amiko ary mitondra fiononana ho ahy.
Miangavy anao aho hanampy anao, Trinite Masina, mangataka aminao aho ho an'ny fanelanelanana sy ny fahamendrehan'i Maria Virjiny Masina, Renin'i Jesosy ary reninay.
Tianao ny fitiavana ny Trinite Masina momba ny fitiavana?
Ny fitiavana no motera vavaky ny vavakay hatrany, na manosika antsika hangataka ny hafa na hangataka fitiavana hiampita ny lalantsika.
Na ahoana na ahoana, ny zava-dehibe dia ny manontany avy amin'ny fo. avy amin'ny fanahy sy amin'ny finoana be.
Ny mahatonga ny vavaka ataontsika hatanjaka sy ahazoana valiny dia ny hoe mino isika fa azo omena.
Ny fangatahana fitiavana dia ny hahafantarantsika ny fomba hamantarantsika azy amin'ny fotoana hiampitana ny lalantsika no zava-dehibe indrindra satria ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra fa mamitaka ny fo ary afaka mahatonga antsika hino fa mahita fitiavana isika raha tsy tsia.
Izany no mahatonga ny fananana ny fitarihan'ny Trinite Masina saika hetsika fiainana sy fahafatesana.
Vavaky ny Trinite Masina ho an'ny raharaha sarotra sy maika
Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra telo sy Iray, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, ny fiandohantsika sy ny fiafarany hiondrika eo anoloanao hiankohofako: hotahina sy hoderaina anie ny Trinite Masina !; Ho anao, Trinite Masina ho anao daholo ny haja, ny voninahitra ary ny fiderana mandrakizay, mino anao amin'ny foko rehetra aho ary maniry ny ho mpanolo-tena mahatoky anao, manatona anao amin'ny fahatokiana aho hangataka anao hahita ahy tsy vitan'ny ratsy ary koa amin'ny rehetra ny fahoriana sy ny loza, ary amin'ny filàko, mangataka aminao aho, omeo ahy ny sitrakao.
Ry Ray any an-danitra, Mpiandry Tsara Jesosy, Fanahy Masina, mangataka aminao amin'ny fanelanelanana sy ny fahamendrehan'i Maria Virjiny Masina aho, omeo fanampiana sy fitarihanao ary fiarovana amin'ny zava-drehetra sy olana eo amin'ny fiainako aho.
Voninahitra ho anao Andriamanitra Ray, loharanon'ny hatsaram-panahy sy fahendrena mandrakizay, avy aminao ny fiainana, avy aminao ny fitiavana, mivoaha isaky ny fotoana hiasa amim-pahamarinana sy fahamalinana hankafizanao ny entanao sy ny fampiononana izay alefanao amiko; tsarovy fa zanakao aho, ary mamindra fo amin'ny fahoriako, ny filako ary omeo fanampiana aho amin'ity toe-javatra sarotra ity:
(anontanio miaraka amin'ny finoana lehibe izay tadiavinao)
Misaotra anao ry Ray be famindram-po raha tsy teo.
Voninahitra ho anao Andriamanitra Zanaky ny Ray any an-danitra izay ao am-poko no ialofan'ny fanahiko, ampianaro aho hanahiry ny fiainanao am-pahatokiana ny fiainanao sy ny hatsaranao, omeo fahatokiana sy fikirizana hanatontosa ny fampianaranao aho ary mahatonga ahy hampihatra ny asan'ny asa soa matetika kokoa, aza avela aho ny tolona isan'andro, manafaha ahy amin'ny ifandraisan'ny fahavalo amiko, afaho aho ary arovy amin'ny fahoriana rehetra izay manelingelina ahy ary omeo fanampiana mahagaga ahy amin'ity olana ity: (avereno ny fangatahana amin'ny fanantenana lehibe).
Misaotra anao ry Jesoa tsara noho ny naha-teo ahy tao anatin'ny fotoan'ny famoizam-po sy fangirifiriana.
Voninahitra ho anao Fanahy Masina, fahazavana izay manazava ny zava-drehetra, ary ianao no fifaliana, firindrana sy fifaliana avy amin'ny famoronana, ataovy ao anaty fampiononana hatrany hatrany ireo aingam-panahy omenao, omeo fanampiana aho amin'ny tsy fahaizako sy ny olana ary omeo fanampiana ahy mba hahafahako mamita izay ilaiko indrindra dieny izao.
Misaotra anao Fanahin'Andriamanitra Fitiavana nanampy ahy rehefa maizina ny zava-drehetra ary mila Fahazavana aho.
Neny sy Mpanjakavaviko, Lady of Heaven Ianao izay manakaiky ny Trinite Masina dia mivavaha ho ahy sy ireo olako sy ny tsy fahaizako ankehitriny, enga anie ho mpisolovava ahy sy tapany aho mba ho tafatso ny fangatahako, ataovy ho ahy ny fahagagana izay ilaiko be indrindra. ny fiainako
Misaotra anao ry Dada malalako, virjiny Virjiny, noho izy mahatakatra tsara sy mankatò ny fitakianay.
Andriamanitra telo izay iray, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, omeo ahy ny famindram-ponao, omeo ahy ny hatsaram-ponao ary omeo vahaolana haingana aho amin'ny alaheloko sy ny fanahiako.
Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, voatahy sy masina indrindra Andriamanitra, tiako ianao, ankamasiniko ianao ary omeko anao.
Ry Andriamanitra Fitiavana, Andriamanitra be fangorahana, avelako ny sitraponao masina, satria tonga ny fotoana anananao ary tsy misy afa-tsy Ianao no mahalala izay tsara indrindra ho ahy, Voninahitra ho an'ny Ray, Voninahitra ho an'ny Zanaka, Voninahitra ho an'ny Fanahy Masina, voninahitra ho an'izay ho tahio sy tsy voatsoaka Trinidad, tahaka ny tamin'ny voalohany, ankehitriny sy mandrakizay, mandrakizay doria.
Ireo tranga izay tsy misy azon'olombelona atao azontsika atao.
Ireo tranga izay nomen'izy ireo fitiliana mpitsabo, izay nanjavan'ny mpianakavy iray, izay misy ankizy mila fanampiana avy amin'Andriamanitra ary tsy mahalala izany na tsy te hangataka azy, ny fanaintainana, ny fanaintainana, ny tsy fahalemena, ny tsy fisiana ary ny toe-javatra sy ny fihetseham-po izay mahatonga antsika ho kivy bebe kokoa. Izy ireo dia amin'ny herin'ny herin'Andriamanitra mazàna.
Ny vavaka Holy Trinity dia afaka manampy antsika tsy ho ela ao afovoan'ny olana sarotra indrindra tokony hamaha.
Ny zavatra rehetra dia fihetsika maneho finoana sy fatokisana ny Tompo, mino fa mahafehy ny zava-drehetra izy ary fantany ny ataony.
Fohy ho fiarovana
Manaiky anao aho ary manaja anao, Ry Virjiny Masina Indrindra, Mpanjakavavin'ny Lanitra, Andriambavy sy Mpiaro an'izao rehetra izao, amin'ny maha zanakavavin'ny Ray mandrakizay, Renin'ny Zanany malalany indrindra, ary ny vadin'ny Fanahy Masina be fitiavana indrindra; ary miankohofa eo an-tongotr'Andriandahy lehibe miaraka amin'ny fanetren-tena lehibe indrindra noho izany fiantrana masina izany; fa feno tanteraka ianao tamin'ny Assomption anao tany an-danitra, nomenao ahy ny fahasoavana tokana sy ny famindram-po amin'ny fametrahana ahy eo ambanin'ny fiarovana azo antoka sy azo antoka indrindra anao, ary ny fandraisana ahy amin'ny isan'ireo mpanompo sambatra sy sambatra indrindra izay nosokirinao tamin'ny tratranao virjina.
Mankalazà ny tenanao, ry Neny sy ny Vaviko be famindra indrindra, hanaiky ny foko tsy hay hadinoina, ny fahatsiarovako sy ny sitrapoko ary ny hery hafa anatiny sy ivelany sy ny saiko; Raiso ny masoko, ny sofiko, ny vavako, ny tanako ary ny tongotro, ka fehezo araka ny fankasitrahan'ny Zanakao, hany ka mikasa hanome voninahitra anao tsy an-kiato izy.
Ary noho izany fahendrena izay naniratan'ny Zanaka malalanao anao izany dia mangataka aminao aho mba hahatongavana amiko fahazavana sy ny fahazavana mba hahafantarako tsara ny tenako, ny tsy misy tsinontsinona ahy, ary indrindra ny fahotako, ny mankahala azy ireo sy maharikoriko azy ireo lalandava ary koa manampy ahy hanana hazavana hahalala ireo fandrika. ny fahavalo tsy manam-paharoa sy ny miady miafina sy miharihary.
Indrindra indrindra, Ry Andriamanitra malala, mangataka ny fahasoavanao ... (List).
izany vavaka mahagaga Ala Santísima Trinidad hangataka ny fahasalamantsika, fiarovana ary fanambinana anay dia matanjaka tokoa!
Miaro antsika, mikarakara anay y tariho izahay ny manao izay sitrapon'Andriamanitra ihany. Afaka mangataka fiarovana ho an'ny tenantsika isika na ho an'ny fianakaviantsika sy ny namantsika.
Tsarovy fa ireo angovo rehetra miabo mamaivay antsika dia mandalo ny zava-drehetra manodidina antsika.
Tsy misy na inona na inona izay tsy azon'ny trinite masina hiarovana antsika, tsy misy mahery na mahery noho Andriamanitra, izany no mahatonga antsika matoky fa izy no mikarakara antsika sy ny antsika na aiza na aiza misy azy ireo.
Afaka mivavaka ianao isaky ny mila.
Ny vavaka amin'ny Trinite Masina dia tsy misy andro na ora na fotoana tsara.
Tsy maintsy mivavaka isika rehefa te hivavaka. Tokony hanana finoana isika ary mino foana fa mandeha tsara ny zava-drehetra.